Ama-Movie ne-TV kaJake Gyllenhaal - Kufanele Ubuke! - Ezokuzijabulisa
UJake Gyllenhaal wazalwa uJacob Benjamin Gyllenhaal ungumlingisi waseMelika futhi ungumkhiqizi wamafilimu. Wazalelwa emndenini waseGyllenhaal ngoDisemba 19, 1980. Uyindodana yomunye wabaqondisi abadume kakhulu uStephen Gyllenhaal futhi umbhali wesikrini odumile owaziwa ngokuthi uNaomi Foner.
UGyllenhaal usebenzise ubuhlakani bakhe ukuthola igama lakhe kumafilimu azimele.Waqala umsebenzi wakhe wokulingisa esemncane.UJake Gyllenhaal uthole ama-movie amaningi esemusha kungekudala.Ifilimu yakhe yokuqala kwakunguCity Slickers eyakhishwa ngo-1991. Kamuva, wadlala indima emafilimini kaYise - i-Dangerous Woman yakhishwa ngo-1993 ne-Homegrown eyakhishwa ngo-1998.
Ukudlala kwakhe kahle kakhulu kwaba njengoHomer Hickam ngo-Okthoba Sky owakhishwa ngo-1999 kanti omunye umsebenzi omangazayo ayewenza njengengane ekhathazekile ngokwengqondo eDonnie Darko eyakhishwa ngo-2001.
‘Sea Wall / A Life’ - UJake Gyllenhaal
I-Jake Gyllenhaal Top Movies & TV Show List:
1. Usuku Olungekusasa
I-Day After Tomorrow yifilimu yesenzo se-American apocalyptic eyakhishwa cishe ngonyaka we-2004. Ibhaliwe, yaqondiswa futhi yakhiqizwa ngokubambisana nguRoland Emmerich.Le movie isuselwe encwadini ethi The Coming Global Superstorm eyashicilelwa ngo-1999 futhi yabhalwa ngu-Art Bell noWhitley Strieber.
Le movie iveza imiphumela emibi yesimo sezulu ngemuva kokuphazamiseka koLwandlekazi i-North Atlantic. Imayelana nezimo zezulu ezimbi kakhulu ezenzeke ekupholiseni komhlaba okuholela enkathini entsha yeqhwa.I-Day After Tomorrow ingenye yamabhayisikobho amnandi kakhulu nezenzo ezihlekisa kakhulu uJake Gyllenhaal ake wabonisa. Iningi lezinqumo ezenziwa nguJake kule movie kumane kuyinhlekisa.
Kuqondiswe nguTom Ford - Kukhombisa impilo phakathi kowesifazane ocebile ngemicimbi ayifunda kwinoveli ebhalwe ngowayengumyeni wakhe.USusan uthola inoveli evela kowayengumyeni wakhe futhi uyithola iphoqa kakhulu. Lapho efunda le noveli, kuyamphoqa ukuthi abhekane namaqiniso amaningi aphazamisayo ngempilo yabo yomshado.
Kuyindaba enokhahlo kakhulu ngothando nangesikhala lapho abantu bephenduka abalingiswa abaqanjiwe. Kule noveli, intombi engajabule iba ngumfazi ojabulayo impela futhi indoda ekhashelwe iba yisisulu futhi.
2. Intaba yaseBrokeback
I-movie yeBrokeback Mountain mhlawumbe ingenye ye-movie kaJake Gyllenhaal ehamba phambili. Noma ngubani ongakayiboni le movie nakanjani ulahlekelwe kakhulu futhi nakanjani ulahlekelwa ngomunye wemisebenzi emihle kaJake.
KuJake Gyllenhaal, kuyamangaza kwelinye izinga kunanoma yimuphi omunye umlingiswa owake wadlala futhi nakanjani bonke abathandi be-movie kufanele babuke le movie ngaphandle kokungabaza. Kuphefumula ingqondo.
I-Zodiac yi-movie ejabulisayo yaseMelika eyakhishwa cishe ngo-2007. Yayiqondiswa nguDavid Fincher. Kususelwa encwadini engeyona eqanjiwe enegama elifanayo neyabhalwa nguRobert Graysmith cishe ngonyaka we-1986.Le movie imayelana nababulali abayindida kakhulu emlandweni waseMelika. Umlingiswa kaJake Gyllenhaal ungaphezulu kweqhawe kule ndaba. Ibhayisikobho yeZodiac iyona engakwazi ukugqamisa empeleni ikhono likaJake Gyllenhaal lokuveza umlingiswa okhathazekile.
I-movie Zodiac ithole ukubuyekezwa okuningi okuhle okubandakanya ukunconywa ngokubhalwa kwayo, ukulingisa nokuqondisa.Le movie iqokelwe imiklomelo eminingi, kufaka phakathi indondo edumile yeSaturn yeBest Action noma iTriller Movie.I-Zodiac yavotelwa njenge-movie ye-12 enkulu kakhulu ekhishwe ngekhulu lama-21.
4. Ukuphela kokubuka
Le movie isuselwa endabeni yamaphoyisa amabili e-LAPD azama ukusinda ezitaladini ezigcwele ubugebengu.Le movie igcwele isenzo kanye nezinye izinyembezi zokuqhaqhazela nezikhathi ezethusayo. UJake Gyllenhaal unikele ngokusemandleni akhe, futhi ubukeka sengathi ulahlekile kumlingisi ngokuphelele kusukela ekuqaleni kwe-movie kuze kube sekupheleni.
Idutshulwa ngesitayela sedokhumentari. Kulandela impilo yansuku zonke yamaphoyisa amabili asemasha ahlala e-LA njengoba engabalingani futhi engabangani.Kukhombisa ukuthi bawaphatha kanjani amabutho obugebengu amakhulu kunabo.
Kungahle kube nemidlalo eminingi yamaphoyisa. Kepha, i-End of Watch yinto ehluke kakhulu.Ukudutshulwa kwe-End Of Watch kwenziwe ngendlela ehluke kakhulu. Ungasho ngohlobo olungokoqobo. Bonke abalingisi kule filimu banikeze ukusebenza kwabo okuhle kakhulu. Nakanjani sizoyincoma le movie kuwe.
5. UDonnie Darko
UDonnie Darko iyi-movie yezindaba eziqanjiwe zesayensi yaseMelika eyakhishwa ngo-2001. Ibhalwe futhi yaqondiswa nguRichard Kelly.Lapha kule movie, uJake unikeze ukusebenza okuvelele okukhombisa ukusebenza okuhlukile kunabanye abalingiswa uJake abekade ebadlala.Ngenxa yale movie nokusebenza kwakhe kule movie, waba mkhulu futhi waduma kakhulu.
Singasho ukuthi uDonnie Darko kaJake Gyllenhaal angathathwa njengomunye wemidlalo yakhe kuze kube yimanje.Le movie iqoshwe ngokuhamba kwezinsuku ezingama-28.Indaba imayelana nentsha engazinzile ngokomqondo evakashelwe yindoda kanogwaja esabekayo, kungekudala izinto ezithile eziyinqaba ziqala ukwenzeka ezinyangeni ezizayo kuze kufike iHalloween.
Kukhona ukuthakazelisa okuningi nje nge-movie kuzo zonke izigcawu. Amaphuzu ehlukene esakhiwo, imicimbi, nezindaba kungabadida ngokuphelele bonke ababukeli.
6. Isikhwishikhwishi sasebusuku
I-Nightcrawler yifilimu ye-American thriller eyakhishwa ngo-2014. Ibhalwe futhi yaqondiswa nguDan Gilroy.UJake Gyllenhaal udlala indawo kaLouis Bloom oyindoda ezimisele kakhulu ukuziphilisa eLos Angeles njengomthwebuli wezithombe.
Isimilo sakhe kuNightcrawler sifana kakhulu nomuntu ongasile ngisho nomuntu odabukisayo ngaphezu kokuhlekisa.UJake uthatha ubuhlanya aye kwelinye izinga. Indaba yale movie iyathakazelisa kakhulu.
Ukudlala umlingiswa kaDkt Johnny Wilcox ongumphathi weThelevishini. UJake Gyllenhaal ubambe iqhaza elehlukile ngalesi sikhathi njengoba phambilini engazange abambe iqhaza elinjalo.
Ukusebenza kwakhe lapha kubukelwe phansi. Kufanele ukubuke lokhu ngokwakho ukuze uzibonele ukuthi kuhle kangakanani ukulingisa kwakhe.
I-movie yeBrothers ikhishwe cishe ngo-2009. Yifilimu yedrama yezengqondo yaseMelika eye yaqondiswa nguJim Sheridan kanti indaba ibhalwe nguDavid Benioff.Empeleni ukubuyiswa kwefilimu yaseDenmark ka-2004.Lapha kule movie - Bafowethu, uJake Gyllenhaal udlala indawo yokuba ngumfowethu osekelayo ogama lakhe linguTommy. Umfowabo uSam ubephesheya kwezilwandle.
Yize uJake edlala indima yokusekela kule movie kuphela. Kepha, uqinisekisile ukuthi udlala okuhle kakhulu kumlingiswa wakhe. UTommy, ufuna okuhle kuphela kumfowabo futhi ufuna ukumsiza kunoma yisiphi isimo esingalawuleki ngaphambi kokuthi noma ngubani akubone.
Ifilimu enzima ukuyibuka futhi inamandla amakhulu. Ukulingisa kwabo bonke abalingisi kwakulungile. Ungasho, kungenye ye- ama-movie angaphansi kakhulu kanye nama-movie acindezelayo okwamanje. Ukuphela kwe-movie kuzokucasula futhi kukwenze ukhale nokuyinto amanye ama-movie angenakukwenza kalula.
Sizoyincoma kakhulu le filimu ngoba inakho konke okungafunwa yinoma yimuphi umthandi wama-movie ohlotsheni lwempi / idrama. Kumele nakanjani ubuke lo msebenzi wobuciko wobuciko njengoba kuzosizuzisa isikhathi sakho.
I-movie kaJake Gyllenhaal izuze indawo yayo lapha ngendlela umlingisi akhombisa ngayo ukulahlekelwa nokuthi uzama ukuyisingatha kanjani.Kukhombisa impilo yompetha wesibhakela olwa nendlela yakhe yokubuyisa indodakazi yakhe emisebenzini yokuvikela izingane futhi abuye nomsebenzi wakhe wobungcweti ngemuva kwesigameko esibulalayo esimphosele endleleni edlangile yokubhujiswa.
Umlingiswa kaJake Gyllenhaal uBilly Hope uphoqeleka ukuthi athathe umhlalaphansi emdlalweni wakhe ngemuva kokulimala kweso. Ngokushesha unkosikazi wakhe uMaureen (Rachel McAdams) bese edutshulwa abese ebulawa ngumfowabo womshayi sibhakela ozayo.UJake Gyllenhaal uyamangalisa ngokuphelele kumlingiswa wakhe. Iningi labantu lalilithanda kakhulu kangangokuba lalifuna ukuthi adlale njengoBatman ngelinye ilanga.
EJarhead, uJake Gyllenhaal udlala indawo yalowo owake wasebenza empilweni yasolwandle ogama lakhe lingu-Anthony Swofford.Le movie izama ukuthwebula uhlangothi oluhlukile lwempi yanamuhla ngombono oyingqayizivele ongaboniswa kaningi. Ukusebenza kukaJake Gyllenhaal kuyakhazimula.
Iqondiswa ngumqondisi uSam Mendes futhi inabalingisi abakhulu abasekelayo.Uma ungakaze uyibone i-movie, lolu akulona uhlobo lwempi olujwayelekile lwe-movie. I-movie ehluke kakhulu, kufanele uyibuke nakanjani.
UJake Gyllenhaal ungomunye wabalingisi abadume kakhulu eHollywood. Wenze ama-movie amaningi nezinhlelo ze-TV okumnike igama elikhulu kwezokungcebeleka. Ndlula kuqala bukela ama-movie akhe uzosazi isizathu sokuthi kungani ithandwa kangaka. Udlale izinhlobo eziningi zezindima emkhakheni wakhe futhi ukwethembeka kakhulu, zonke izinhlamvu aseke wazidlala, muhle kakhulu kubo bonke. Ungabuka wonke ama-movie esiwabhale ngenhla bese uzibonela ukuthi muhle kangakanani ekusebenzeni kwakhe.
INetflix India StreamFest - Jabulela ukusakazwa kwezinsuku ezi-2
Funda Izincwadi ku-PC usebenzisa i-Kindle Reader - Landa Manje
ungayifinyelela kanjani i-hotstar e-usa
isithunzi esasinyonyobela i-kissanime esondelene kakhulu
https //aka.ms/remoteconnect code minecraft
bukela umbukiso wamahhala we-tv online
ungalanda imibukiso ye-netflix ku-mac
putlocker - bukela ama-movie online mahhala
ucwaningo lwamakhadi wesipho amazon